"GTA: San Andreas" मा एक गिरोह किराया गर्ने बारे विवरण
आज हामी एक गिरोह लेना कसरी कुरा हुनेछ "GTA:। San Andreas" यो परियोजना वर्ष धेरै पहिले नै छ हुनत, आज मान्छे ड्र। यस्तो भारी सफलता को कारक र साथै बीचमा गिरोह नियन्त्रण भनिन्छ गर्नुपर्छ। यो निर्णय गर्ने गेमप्लेको पनि अधिक रोचक बनाउँछ।
द माफिया, दा Nang Boys, Triads: "GTA San Andreas" मा एक गिरोह लेना कसरी प्रश्न गर्न गर्नुअघि, यो परियोजना विभिन्न आपराधिक गिरोह को एक नम्बर प्रदान गर्दछ उल्लेख गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक प्रभाव, विशिष्ट रंग को आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो व्यापार, र प्राकृतिक शत्रुहरू छ। सुरुमा, मुख्य चरित्र गिरोह ग्रूभ सडक परिवार को सदस्य हुनुहुन्छ। को Ballas - यसको मुख्य शत्रु। खेल ग्रूभ सडक परिवार, लगभग सबै आफ्नो अधिकार गुमाए साथै वस्तुतः विघटित गरेको बताउँछ। यस मामला मा, Ballas स्थिति र वृद्धि धन बलियो बनायो।
हामी कसरी गिरोह सदस्य लेना को प्रश्न गर्न बारी। "GTA: San Andreas" विभिन्न समूह को परिचय संग धेरै विविध भएको छ। मुख्य पात्र आफ्नै शत्रु संग लड्न सक्षम छ। तर, एक थप प्रभावकारी समाधान एक समूह लेना हुनेछ। एउटै गिरोह खेलाडी मा Grove सडक परिवार को सदस्य को केवल समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को समूह को एक प्रतिनिधि लेना असम्भव छ। आफ्नो गिरोह भविष्य सदस्य अन्तरक्रिया गर्न, उहाँलाई आउँछन्। त्यहाँबाट, प्रमुख जी यो हामी वर्ण हरियो सूट मा लुगा चाहिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ थिच्नुहोस्। निस्सन्देह, पेसा protagonist को सुरु मा आफ्नै लडाकूको "सेना" सङ्कलन गर्न सक्षम हुने छैन। ठूलो दल संगठित गर्न, यो खेल पारित गर्न आवश्यक छ। अख्तियार नायक को कार्यहरू को कार्यान्वयन वृद्धि हुनेछ। फलस्वरूप, हामी थप लडाकूको लेना सक्षम हुनेछ।
के तपाईं "GTA: San Andreas" मा एक गिरोह लेना कसरी प्रश्न बुझ्न भने थप विवरण, यो कारणले यस्तो समूहमा शत्रु क्षेत्रमा जित्न सक्छौं कि उल्लेख गर्नुपर्छ। फलस्वरूप, यो व्यक्तिगत सीमाहरु विस्तार गर्न मात्र होइन, तर पनि विरोध संगठन नष्ट गर्न सम्भव छ। इलाका कब्जा गर्न, तदनुसार नक्सामा चिनो लगाइएको छ कि क्षेत्र जानुहोस्। अर्को हामी कुनै पनि शत्रु आक्रमण। फलस्वरूप, यस क्षेत्र रातो रंग परिवर्तन हुनेछ, र हामी केही समय को लागि यो पकड हुनेछ। सफलता को क्षेत्र को मामला मा हाम्रो हुनेछ।
समय समयमा गर्न विरोधीहरूले यसलाई आफैलाई फिर्ता गर्न प्रयास गर्नेछ। यस मामला मा, विशेष चरित्र जुन हामीले आक्रमण गरेका थिए भन्ने हो नक्सा, देखिन्छ। कल उपेक्षा गरिएको छ भने, हामी क्षेत्र नियन्त्रण गुमाउन। इलाका रक्षा गर्न, निर्दिष्ट स्थानमा जाने र सबै शत्रुलाई नष्ट।
GTA San Andreas: एक गिरोह कसरी लेना - कोड र थप जानकारी
सदस्यहरु को भर्ती निम्न हामीलाई पालना र शत्रु आक्रमण संग, तर पनि प्रहरी संग मात्र होइन सामना गर्न मदत गर्नेछ।
यो समस्या समाधान गर्न एउटा सजिलो तरिका हो। हामी विशेष कोड प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ: OGXSDAG। कि पछि तुरुन्तै अख्तियार प्राप्त को लामो प्रक्रिया बाइपास, गिरोह सदस्यहरूको अधिकतम उपलब्ध नम्बर लेना सक्षम हुनेछ। अब को Grove सडक परिवार बारेमा अलि बढी भन्न गरौं। अन्य कुराहरू, लगातार टियर ब्यान्ड आन्तरिक संघर्ष बीचमा। समूह को सदस्य: CJ, ठूलो चुरोट, राइडर, साह्रै राम्रो। संगठन स्वामित्व क्षेत्रमा पूर्व लस सैंटोस र Ganton। द Ballas लागि, यो दुई समूह र RHB FYB विभाजन गरिएको छ। पहिलो तथापि, दक्षिण Idlewood कब्जा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, ग्लेन पार्क भनिने सानो क्षेत्र नियन्त्रण गर्दछ। साथै, Ballas गिरोह पूर्व लस सैंटोस नियन्त्रण बढाउनका Vagos र Grove सडक परिवार, झगडे। पहिलो तथापि, दक्षिण Idlewood कब्जा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, ग्लेन पार्क भनिने सानो क्षेत्र नियन्त्रण गर्दछ। साथै, Ballas गिरोह पूर्व लस सैंटोस मा एक पकड प्राप्त गर्न, झगडे Vagos र Grove सडक परिवार। बन्द हतियार र लागूऔषधको वितरण।
त्यसैले हामी एक गिरोह कसरी लेना बाहिर समझ "GTA:। San Andreas"
फोर्ज र फैशन Minecraft खेल्न कसरी स्थापना गर्ने? सरल निर्देशनहरू
सबैभन्दा चतुर खेल के हो?
नयाँ भेगास: कन्सोल नतीजा3र नतीजा आज्ञा। Cheats र कोड नतीजा लागि: नयाँ भेगास
"Maynkraft" टिभी गर्न कसरी विवरण mods बिना
खेल "गाढा Coles 3" सिस्टम आवश्यकताहरु
के - shockwave फ्लैश प्रतिक्रिया गर्दैन "Yandex ब्राउजर"? सुझाव र चाल
"Yandeks.Metrika" (साइट): स्थापना गर्न कसरी
धातु अन्तर्गत waterproofing: चयन र स्थापना
के उमेर मा बच्चा बीट दिन, र के रूप मा गर्न सक्छन्?
3 महिना पुरानो बच्चा लागि मालिश। एक वर्ष मुनिका बच्चाहरु लागि मालिश
Emomali Rahmon। ताजिकिस्तान अध्यक्ष। Emomali Rahmon र तिनको परिवार
कपडा, आन्तरिक मा अन्य रंगहरु संग टकसाल रंग को संयोजन। रंग मिलान नियमहरू
को ख्रुश्चेव मा कास्ट-फलाम बाथटब: आकार र डिजाइन
Predestination - यो के हो? Foreknowledge र परमेश्वरको predestination
सामाजिक प्रगति मापदण्ड: अस्पष्ट घटना को परिभाषा